Arzantina: Ny olana amin’ny fiarandalamby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2019 3:59 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny 12 oktobra 2007)
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Ity lahatsoratra manokana momba ny olana amin'ny fiarandalamby any Arzantina ity dia nosoratan'i Alejandro Lezcano, izay mitazona ny bilaogy Hacerse Cargo [ES]. Natokana hanoratana ny ahiahy amin'ny fitateram-bahoaka any Buenos Aires ny bilaogy .
Ny Alatsinainy 1 Oktobra, nanambara ny fahazoana ny tolo-bidy tamin'ny fiarandalamby haingam-pandeha fahatelo any Arzantina ny filoha Nestor Kirchner. Hampitohy ny tanànan'i Buenos Aires amin'ny iray amin'ireo tanàna falehan'ny mpizahantany malaza indrindra, Mar del Plata (500 km halavirana) ilay fiaran-dalamby vaovao. Ny herinandro lasa teo dia nisy ny fahazoana tolo-bidy iray hafa nambara ho an'ny fiaran-dalamby hampifandray an'i Buenos Aires amin'i Mendoza, faritra malaza amin'ny famokarana divay (1000 km ny halavirana).
Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha voalohany any Arzantina no zotra mampifandray an'i Buenos Aires amin'ireo tanàna lehibe roa hafa ao amin'ny firenena: Rosario sy Cordoba. Nirehareha ho manana hafainganam-pandeha 120 kilometatra isan'ora ilay fiaran-dalamby, kanefa tamin'ny dia voalohany nandehanany, maivana lavitra noho ny dokambarotra ilay hafainganam-pandehany. TBA Me Mata [ES] describTBA Me Mata [ES] namaritra ity dia ity:
Niala ny toby fiantsonana Retiro tamin'ny 1 Oktobra ny dia “fitokanana”. Tonga enina ora taty aoriana tany Rosario izy !!! Na izany aza, nahavita nandresy ny marika teo aloha: 8 ora ho an'ny 300 kilometatra izay manasaraka ireo tanàna roa lehibe indrindra ao amin'ny firenena ilay dia natao. Midika fa 37,5 km isan'ora ny hafainganam-pandeha. Ao anatin'ny fotoana (ora) tahaka izany, raha nandeha fiara fitateram-bahoaka, dia afaka nandeha sy niverina izahay ary mety nanam-potoana hafa hitsidihana ny Tsangambaton'ny Sainam-pirenena, nandehandeha nanaraka ny moron-dranomasina ary nisotro kafe teny amin'ny làlan'ny mpandeha an-tongotra Cordoba.
Lohahevitra mahamenatra ho an'ireo Arzantina maro ny fitokisana fiaran-dalamby. Milaza ny sasany amin'ireo fitarainana goavana fa tsy mba raharahiana ny fiarandalamby, tara foana izy ireo, miova foana ny ora fiangàina, ary marobe ireo loza miseho. Milaza ny olona fa mandeha toy ny biby izy ireo satria tsy ampy ny fiarandalamby mamaly ny filàna ary tena ratsy ny tolotra rehetra.
Nipoitra ny blaogy avy amin'ny fomba fijerin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny tolotra fiarandalamby. Ny sasany mampiasa ny bilaogy ho toy ny fomba hanoratana ny olana mikasika ny tolotra. Nosoratan'ny iray amin'ireo mpiasa ao amin'ny zotram-piarandalamby ny Un Grano en El Orto [ES] .
Manana ny bilaogy Usuarios del Ferrocarril Roca (UFR) [ES] ireo mpampiasa ny zotra General Roca, ka manasa ireo “izay te-handray anjara amin'ity bilaogy ity miaraka amin'ny tantara fohy, rakitra na zava-niainana tamin'ny zotra Roca” ny tompon'ny tranonkala mba hifanerasera aminy. Hoy koa izy, “afaka mamorona FIARANDALAMBY tsara kokoa isika rehefa miaraka.” Ny sasany amin'ireo lahatsoratra dia manasongadina ny filaharana lavabe rehefa hividy tapakila, misy kosa anefa ny sasany tsy milahatra, ary koa ahitana ny sarin'ireo toby fiantsonana sy ny haratsin'ny seza ao anaty fiarandalamby.
Sary avy amin'i Usuarios del Ferrocarril Roca, nahazoana alalana.
Efa mila ho “odyssée” ny mividy tapakila. Tsy tokony hiandry mihoatra ny antsasak'adiny ny mpanjifa rehefa hividy tapakila. Reraka izahay rehefa avy miasa kanefa tsy maintsy mijoro mandritra ny filaharana lavabe, avy eo tsy maintsy mandeha lamasinina tahaka ny omby ao anatiny. Faharerahana fanampiny ho an'ny mpandeha izany. Ankoatra izany, mandoa vola fanampiana ho an'ny fiarandalamby amin'ny hetra izahay, ka mandoa vola indroa miaraka amin'ny tapakila no iafaranay. Maro ny olona tsy te-handoa vola amin'ny fepetra tsy maintsy hiaretanay ary manana ny antony rehetra hitarainany izy ireo. Raha hitan'ny olona fa mihatsara miaraka amin'ny vola aloa aminy ny tolotry ny fiaradalamby, dia ho faly izy ireo. Na izany aza, fantatray fa tsy nisy niova hatramin'izao.
Sary avy amin'i Usuarios del Ferrocarril Roca, nahazoana alalana